Weerar dad lagu diley oo ka dhacay Gobolka Mudug – DMS
HomeWararkaWeerar dad lagu diley oo ka dhacay Gobolka Mudug
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan maleeshiyaad hubeysan oo xalay Tuula Qorax ee Galbeedka Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ku dileen dad shacab ah oo kamid ahaa Xoolo Dhaqatada deegaankaas.
Maleeshiyaadka hubeysan ayaa dadka ugu tegay sida la sheegay hooygooda, iyaga oo rasaas ku furey,waxaana halkaasi ku geeriyooday laba ruux, iyada oo Goobta ay ka baxsadeen maleeshiyaadkii falkaasi geystay.
Dadka Tuulada Qorax qaarkood ayaa waxaa ay sheegeen in arrintaan ay salka ku heyso aanooyin qabiil,sidoo kalena Bulshada Tuulada Qorax iyo tuulooyinka kale ay cabsi soo wajahday.
Wararka kale ee aan ka helayno Galbeedka Gobolka Mudug waxay sheegayaan in sidoo kale la weeraray dad xoola dhaqato ah oo ku sugnaa tuulooyin hoos taga degaanka Laan-waalay oo aan sidaasi uga dheeray Tuula qorax.
Weeraradaan khasaaraha geystay ee ka dhacay Galbeedka gobolka Mudug ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dagaal beeleed khasaaro geystay uu ka dhacay deegaano ka tirsan Bariga Gobolka Mudug.
Maamulka Gobolka Banaadir oo ka Shirey Amniga Caasimadda